Raiisal Wasaaraha Somaliya oo maanta sheegay in uu soo dhisi doono Xukuumad ballaaran (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
Raiisal Wasaaraha Somaliya oo maanta sheegay in uu soo dhisi doono Xukuumad ballaaran (Daawo Sawirada)
aadan21 / December 24, 2014
iftineducation.com – Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Dr. Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa wuxuu maanta balanqaaday in uu soo dhisi doono Xukuumad tayo wanaagsan leh, haddii uu helo taageerada Xildhibaanada Baarlamaanka.
“Marka aan helo kalsoonidiina, waxaan balanqaadayaa inaan soo dhiso Xukuumad loo dhan yahay. Xukuumaddaas oo noqon doonta mid matasha qeybaha kala duwan ee Shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna leh karti, aqoon, hufnaan, khibrad iyo firfircooni.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha Somaliya.
Sidoo kale waxa uu yiri “Hadafka Xukuumadda aan soo dhisidoono, wuxuu noqon doonaa, in la hormariyo, lana higsado, gaaritaanka Isku-filnaasho dhanka Amniga, Dhaqaalaha iyo Adeegyada Bulshada sida ugu dhakhsida badan.”
Ra’iisal Wasaare Sharmaarke, ayaa yiri “Barnaamijka xukuumadda aan soo dhisidoono ka sokow, aniga oo kaashanaya Madaxweynaha, Hoggaanka Golaha Shacabka, Xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. waxaan dardar-galinayaa helitaanka Siyaasad xasiloon oo isfaham leh, una dhaxeysa Madaxda Soomaaliyeed heer Federaal iyo heer Dawlad-goboleedba, si dib loogu hanto kalsoonida Shacabka Soomaaliyeed. Helitaanka Xasiloonida iyo isfahamka Siyaasaddu, wuxuu lafdhabar u yahay jiritaanka qaranimada Soomaaliya.”
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay kulankii maanta ee Baarlamaanka, ayaa wuxuu Xildhibaanada kaga mahadceliyay kalsoonida ay u muujiyeen Ra’iisal Wasaarihiisa cusub.
“Waxaan idinka mahadcelinayaa ansixinta Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Somaliya, oo aan u soo magacaabay Danjire Cumar oo kalsooni aan ku qabo inuu howlaha harsan dhameystiri karo, sidoo kalana uu sii wadi karo hawlihii labadii sano ee la soo dhaafay la qabtay.” Sidaasi waxaa yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
25 Sawir oo ku tusinaya horumarka iyo isbedelka Muqdisho ee Degdega ah
Madaxweynaha Somaliya oo sheegay in uu la shaqayn doono Raiisal Wasaaraha, kana fogaanayaan is qab qabsi (Daawo Sawirada)